Curacao Sandals® Resorts yakagadzirira kubhuka ne $ 1000 twist
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Curacao Kuputsa Nhau » Curacao Sandals® Resorts yakagadzirira kubhuka ne $ 1000 twist
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Curacao Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Resort inotaridzika seSandals Royal Curaçao, inopa yakatemwa-nguva yekuchengetedza uye inovhura zvirongwa zvemaSandals akawanda "maFirst."
Sandals Royal Curaçao inogara pane yakasarudzika 3,000-acre yakachengetedzwa kuchengetedza.
Pano, vakaroorana vanozoona runako uye nzvimbo dzakasiyana dzeCuraçao, inozivikanwa nenzvimbo yayo inonakidza, mahombekombe akajeka, mapako emarara uye guta guru reWillemstad, UNESCO World Heritage Site.
Inowanikwa pamahekita makumi mana nemana munzvimbo yeSanta Barbara yakazvimiririra, yakasarudzika 44-acre yakachengetedzwa inochengetedzwa, Sandals Royal Curaçao zvichanyatsobatana zvishamiso zvepasirese - gwenga, gungwa, makomo, uye mahombekombe - neruzivo rwekushanya. Pano, vakaroorana vanozoona runako uye nzvimbo dzakasiyana dzeCuraçao, inozivikanwa nenzvimbo yayo ine hunyanzvi, mahombekombe akajeka, mapako emarara uye guta guru reWillemstad, UNESCO World Heritage Site, vachiri kuzvifarira. Luxury Inosanganisirwa® Zororo chiitiko cheSandals Resorts chinozivikanwa.
Yakatemerwa kuvhura Kubvumbi 14, 2022, Sandals Royal Curaçao iri nyore kungori mamaira gumi nemashanu kubva kuairport. Chimiro chayo chinoyemurika chakatarisana nekumadokero chinokwezva kukwezva kwezuva rinoyevedza reCaribbean, richipa vashanyi mukana wekuona. Iine makamuri anokwana makumi matatu neshanu nemakumi masere muzvikamu zvemakamuri makumi maviri nemana, Sandals Royal Curaçao ichave nezvakawanda-zvinosanganisira sarudzo dzeumbozha kupfuura nakare kose, kusanganisira maviri matsva masiginecha masiteji, iyo Awa Seaside Butler Bungalows uye Kurason Island Poolside Butler Bungalows, izere neRunyararo Ruchinyura Matubhu ™, madziva epachivande, sevashandi, uye zvemitambo uye zvine mutsindo zvinoshandurwa MINI Coopers inoyemura vashanyi kutyaira vachiri kuongorora chitsuwa.
Nzvimbo Yekuwana & Kuongorora
Sachigaro weMutungamiri weSRI, Adam Stewart, anoti kunze kwenzvimbo nyowani, kukura kwakanyanya kwenzvimbo dzakazvimiririra dzakachengetedzwa dzakapoterera Sandals Royal Curaçao inobvumidza zviitiko zvitsva zvevaenzi. “KuSandals Royal Curaçao, vashanyi vachakwanisawo kukwira, kuchovha bhasiketi nekutora bhasikiti repikiniki kuita mafuta mazuva ekutsvaga nekutsvaga. Kudanana kwakachena. Uye ivo vanokwanisa kuenderera neuyu mweya wekuda kupfuura magedhi edu uko kwavanozowana nzvimbo yepasirese yekudyira kukuru, veko vanonakidza, hunyanzvi, uye vashanyi vanobva kumativi ese epasi. Isu takaisa mari yekuwedzera $ 72 mamirioni mukusimudzira uye kugadzirisa kugadzirisa chirongwa che "Sandalization" cheichi chivakwa chinoshamisa, uye hatigone kumirira kuti vaenzi vedu vatye, "akadaro Stewart.
Sandals Royal Curaçao ichave pamba peiyo brand yekutanga Dos Awa infinity dziva nemaonero akatarisa gungwa nenzvimbo ine makomo ine makomo, uye maDuchess, maSandals 'eresitorendi yekutanga-yakatenderera uye bhawa, yakavakwa kubva 92-tsoka tsoka chiDutch chikepe. Iine mapfumbamwe epano 5-Star Global Gourmet ™ maresitorendi (masere acho ari matsva uye akasarudzika kuSandals Royal Curaçao), vashanyi vanozodya zvinwiwa zvepasi rose kubva muhari inonyungudika yechikafu chepasi rose, kusanganisira waini chaiyo neDutch chizi bar. Vakaroorana vanogonawo kudya pa-iyo-kuenda kune matatu matsva emahombekombe egourmet chikafu matraki anopa echinyakare Curaçao fizi, Spanish tapas, uye Asia fusion, kana kutora chinwiwa kune chero eakavakirwa's gumi akasiyana mabara.
Sandals Royal Curaçao ichaenderera nemukurumbira wechiratidzo sechiremera mukudanana nenzvimbo nhatu dzemuchato dzemahombekombe. Iyo yekutandarira ichave iine yakasarudzika Red Lane® Spa ine nhanhatu yekunze spa cabana nemakamuri ekurapa; akawedzera madziva; kupinda kune yakavakidzana 18-hole Pete Dye kukwikwidza gorofu kosi; 38,000-mativi-tsoka emukati uye yekunze nzvimbo yemusangano, yakakura kwazvo pachitsuwa; mairi maviri epanzvimbo marinas uye makumi manomwe masayiti enzvimbo, anokodzera vashanyi vari kutsvaga kujoina vanopfuura zviuru zana vakasiyana avo vakawana PADI®-certification kuburikidza nekambani yekutandarira kare.
Kugadzirira, Set, Tengesa
Sekureva kwaGary Sadler, Executive Deputy President, Global Sales & Industry Relations for Unique Vacations Inc. (UVI), mubatanidzwa wemumiriri wepasi rose weSandals Resorts, vashanyi vanogadzirira kugara kuSandals Royal Curaçao ikozvino kusvika munaNovember 2, 2021, gamuchira yakakosha Grand Opening Offer nemari inosvika kusvika kumadhora chiuru. Sandals Sarudza Mibairo Vashanyi vanozogoverana mune ino chengetwa uye vanogona kuwana mamwe akasarudzika maratidziro nesarudzo yavo ye $ 1,000 Island Routes Tour kiredhiti, $ 200 Red Lane® Spa kiredhiti, zviuru zvishanu zveSandals Sarudza Mibayiro Yekutendeseka Points, kana PADI® Tsvaga Scuba Diving Chiitiko kwemaviri ($ 200 kukosha) paunenge uchibhuka pekugara yehusiku hutanhatu kana kupfuura nhasi kusvika munaAugust 5, 2021. simba risingadzoreke. Tine chokwadi chekuti vamwe vedu vachada kutengesa hotera iyi, ”akadaro Sadler.
Nhanganyaya mitengo paSandals Royal Curaçao inotanga pamadhora mazana matatu nemakumi mana emunhu pamunhu, husiku hwoga hwoga, uye matereji echikamu anotanga pamadhora mazana mashanu nemakumi masere neshanu pamunhu, husiku husiku, zvichibva pakugara kaviri uye kugara kwehusiku hunomwe. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya www.mumusi.com. Kuti udzidze zvakawanda nezve izvo zvaunotarisira uchigara paSandals Royal Curaçao, verenga iyi blog pano: https://www.sandals.com/blog/curacao-sandals-latest-destination/.
Sandals Resorts inopa vanhu vaviri murudo zvakanyanya kudanana, Luxury Inosanganisirwa® zororo ruzivo muCaribbean. Iine gumi nematanhatu anoshamisa maratidziro emahombekombe egungwa muJamaica, Antigua, Saint Lucia, Iyo Bahamas, Barbados, Grenada, uye Curaçao kuvhura Kubvumbi 16, 14, Sandals Resorts inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero imwe yekushandira kambani papasi. Siginecha Rudo Nest Butler Suites® yeiyo yekupedzisira mune zvakavanzika uye sevhisi; vatengesi vakadzidziswa neGuild of Professional English Butlers; iyo Red Lane Spa®; 5-Nyeredzi Global Gourmet ™ kudya, kuve nechokwadi chepamusoro-pasherufu doro, premium waini, uye gourmet hunyanzvi maresitorendi; Aqua Nzvimbo nehunyanzvi PADI® chitupa uye kudzidziswa; inokurumidza Wi-Fi kubva kumahombekombe kuenda kuimba yekurara uye Sandals Yakasarudzika Michato ese eSandals Resorts anosarudzika. Sandals Resorts inovimbisa vaenzi runyararo rwepfungwa kubva pakusvika kusvika pakuenda ne Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana, matanho akasimudzirwa nekambani ehutano uye ekuchengetedza akagadzirirwa kupa vashanyi chivimbo chakazara pavanenge vachienda kuzororo kuCaribbean. Sandals Resorts chikamu chemhuri dzine dzimba Sandals Resorts International (SRI), yakavambwa nemushakabvu Gordon "Butch" Stewart, iyo inosanganisira Beaches Resorts uye ndiyo yeCaribbean inotungamira ese-anosanganisira resort kambani. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Sandals Resorts Luxury Inosanganisirwa® mutsauko, shanya www.mumusi.com.